Ihe Nzuzo Zoro ezo nke Google na Facebook | Martech Zone
A afọ ole na ole gara aga, m na-kpuchie SEO. Anaghị m egwu egwu… okporo ụzọ nke Google na-eziga na blọgụ anyị debere m n'abalị, na-ede, na-ede, na-ede, na-ede, na-ede. Anọ m na-achụ algorithm, asọmpi m, ọ na-agbakwa mkpebi niile m nwere na blọọgụ. Enwere m ike ịpịkwuo nleta na nleta, na-agbakwunye, na m nọ n'ọkwá dị mma ma dị mma na usoro sara mbara. Ọ bụ ara.
Ọ bụ ara n'ihi na anaghị m a attentiona ntị na ndị na-ege m ntị na-etolite. Afọ abụọ gara aga, amalitere m igwu ala n'okporo ụzọ m ma hụ ihe na-eju anya. Nke mbu, imirikiti okporo ụzọ m anaghị abịa site na isiokwu dị elu, ọ na-abịa site na mkpụrụokwu dị mkpa dị mkpa ebe m emeghị ọkwá nke ọma ma ọlị. O mere ka m chee na ihe niile m na-eme bụ azụ… M lekwasịrị anya n'ọkwa na olu olu karịa ka m lekwasịrị anya na mkpa ndị na-ege m ntị.
Emegharịrị m ilekwasị anya n'inye ọdịnaya dị mma karị, na-abawanye ugboro ole ọdịnaya ahụ, na-achọpụta na m nwere okporo ụzọ ahụ. Usoro ahụ nwere mgbasa ozi na-ada ụda narcissistic… Anaghị m agụ ndị na - agụ akwụkwọ m. Mana ọ pụtara na ndị na-ege m ntị ka m ga-ekwurịta okwu. Ha agaghị ebe ọzọ ige m ntị, ha na-abịakwute m. N'oge ahụ, amalitere m ịpị ndepụta ahịa email anyị ka anyị wee nwee ike ịgwa ndị na-ege anyị ntị okwu.
Google agaala na-agbanwe algọridim ya. Enwere utịp nchọta akwụmụgwọ ọzọ na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ… ụfọdụ SERPS dị na mpaghara nwere n'ezie peeji nke nsonaazụ akwụ ụgwọ na ha. Maka ndị ahụ nwere ihu ọma ịnya ụgbọ ala, enweghị nsonaazụ na ibe ọ bụla yana tweaking na ide adịghị mma. Nkwalite na mmata site na isi mmalite bụ isi ihe na mbọ gị. Nke a na - eme ka ire ahịa ọdịnaya maka SEO dịkwuo ọnụ ma dịkwa oke ọnụ - mana ọ ka bụ nnukwu ego.
Mgbe obula anyi ghapuru ndi ahia anyi ihe omuma SEO, n’agbanyeghi, anyi na-etinye ha n’ime ntughari nke ntughari… ndenye aha maka ntanye na nbudata ya na ndenye aha ahia email kwesiri ka a ma ama. I nweghi nke gi okporo ụzọ okporo ụzọ, Google na-eme. Y’oburu n’inwere obi oma ma obu ikike inwe ha okporo ụzọ gị na saịtị - ịkwesịrị ịgbanwe ha n'ime gị okporo ụzọ.
Facebook na nso nso a mara ọkwa na okporo ụzọ nke ibe azụmahịa gị na-adaba na ha chọrọ ka azụmahịa gị zụta karịa Facebook Mgbasa ozi. Ọ mara mma akụnụba… ha nwere ndị na-ege gị ntị na ha achọghị inye gị ya n'efu. Ikwesiri ịkwụ ụgwọ. N'uche m, nke a ga-abụ nke iwu. Nnukwu netwọkụ mmekọrịta na ọdịnaya - ọkachasị nke ọha na eze - nọ n'okpuru nnukwu nrụgide iji kpata okporo ụzọ ahụ. Ha ga na-agbara gị ụgwọ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ohere.
Ya mere, olee ihe ndị a mụtara?
Kwesiri itinye ego na ọdịnaya na ntughari nke ahụ na - etolite mgbasa ozi gị, ma ọ bụghị na ị ga - aga n'ihu na - akwụ ụgwọ - yana ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ọzọ - maka ịnweta site na saịtị ndị ọzọ.
Ga-etinye ego na atụmatụ ịre ahịa email nke ahụ na - etolite ntọala gị nke ndị debanyere aha dị mkpa ị nwere ike ịkwanye ozi ma gbanwee.
Still ka nwere uru. Ọ bụ ezie na Facebook na Google nwere ike ịnya isi ọtụtụ ijeri ndị ọrụ, ndị ọrụ ahụ anaghị aga ebe ndị ahụ iji nyochaa nzụta ọzọ ha. Ha na-aga ebe ahụ chọta ebe nyocha di. Gbalia ihu na ebe ị na-aga bu nke gi!
Anaghị m akwado ịhapụ idobe mmekọrịta gị na mmadụ (dịka m anaghị akwado ịkwado mbọ gị SEO). Ihe m na-ekwu bụ na ị ga-edozi ihe ndị ị na-ebute ụzọ. Ekwuru m mgbe niile na mgbasa ozi mgbasa ozi bụ ọwa nkwado dị egwu ebe enwere ike ikwughachi ozi gị. Nke ahụ ka bụ eziokwu taa… mana ịkwesịrị ilelee Google na Facebook (na Twitter, Google+, LinkedIn, wdg) dị ka gị ndị asọmpi, ọ bụghị ndị enyi gị. Ihe mgbaru ọsọ gị kwesịrị ịbụ izu ohi akụkụ nke ndị na-ege ha ntị ị na-eso ma webata ndị ahụ na saịtị gị, na akwụkwọ akụkọ gị, yana ụzọ ntụgharị gị!
Nsonaazụ njedebe maka saịtị anyị bụ na nke a agaghị enwe mmetụta zuru ezu. Anyị anaghị adabere na okporo ụzọ Facebook - dịka anyị anaghị adabere na okporo ụzọ ọchụchọ Google ọzọ. Amaara m na ọ bụrụ na m dee nke ọma, dee ederede ndị ka mkpa, ma gaa n'ihu na-agbanwe ndị ọbịa na nke anyị nwere mgbasa ozi na-ege ntị, anyị ga-anọgide na-eto.
Tags: ndị na-ege ntịakakabaredeFacebookfacebook mgbasa ozigoogle +nwere mgbasa oziakwụ ụgwọ mgbasa ozielekọta mmadụ na netwọk
Dee 17, 2013 na 6: 36 AM
Ahụrụ m isiokwu a n'anya! N'agbanyeghị ihe anyị chọrọ ikwere, ndị mmadụ na-aga Google dị ka nkwụsị mbụ ha maka nyocha na ndị mmadụ na-etinye oge dị ukwuu na Facebook. Kụrụ ntu ahụ n'isi, ọ bụ ezie na… ahịa ha ga-abụ okporo ụzọ gị. Mfe ikwu, ike ime.
Echere m na a na-eji mgbasa ozi mgbasa ozi agbasa ozi na mbụ banyere gị na mgbasa ozi / mgbasa ozi gị, mana ozugbo ị "na-agagharị", dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ị ghọrọ usoro ahịa ahịa gị kachasị mma. Mgbanwe ndị a niile na Google amanyela anyị ndị na-ere ahịa ịntanetị ka anyị bụrụ ndị na-ere ahịa dị mma ma mara ihe karịa ndị na-adabereghị na nyocha ọchụchọ na-agbanwe agbanwe na-etinye ọtụtụ awa na elekere SEO!
Dee 17, 2013 na 8: 07 AM
Doug, ị meela nnukwu ọrụ nke ime ihe ị na-ekwusa. Otú ọ dị, echere m na blọọgụ gị ruru ebe isi okwu ebe okwu nkenke ọnụ na-ezo aka (yana ogologo ọdụ organic) nwere ike ịbụ isi mmalite ahịa. N'ihi na onye na-amalite na blog, ha ga-adabere n'ụzọ zuru ezu na mgbasa ozi "akọrọ" (dịka Jay Baer kpọrọ ya) isi mmalite.
N'ụzọ doro anya, ọhụhụ mgbasa ozi nwere ogologo oge kachasị mma, yabụ, mgbalị niile obere oge kwesịrị iburu ebumnuche ahụ (yabụ ịzụlite ndị na-ege anyị ntị).
BTW, M ga-etinye plọg maka "The Owned Media Doctrine" nke Jacson na Deckers. Ezi ihe, ma dee ihe ị na-ekwu.
Dec 17, 2013 na 11:40 PM
Amalitere m akwụkwọ Taulbee na Erik! Anyị ga-enwe post banyere ya n'oge na-adịghị anya.